Vakaoma Musoro muZanu-PF Vokanganisa Basa reCOPAC
Kurume 30, 2012
Zimbabwean Information and Publicity Minster Jonathan Moyo speaks at a news conference in Johannesburg, South Africa, Wednesday, Oct. 3, 2001. Moyo said that Zimbabwean officials planned to honour an international agreement to retore law and order to farm
Komiti yemakurukota inokokera mashandiro ekomiti yeparamende iri kutungamira mukunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika iri kutarisirwa kusangana neChitatu chinotevera kiuitira kuti ipedzise misariridzwa pakunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika.
Komiti iyi ikatadza kuwirirana inenge yodaidza vatungamiri vemapato matatu ari muhurumende yemubatanidza kuti vagadzirise zvinenge zvichipokanwa.Asi vakuru ava vaonogona zvakare kupesana pazvinhu zviri kudiwa nevanhu kuti zvinge zviri mubumbiro idzva.
Nyaya dzinenge dziri mugango dzinosanganisira nyaya yekupa masimba kumatunhu uye nyaya yeminda.
Kunyange poita chipatapata ichi, vakaoma musoro muZanu-PF vari kuimba rwiyo rwekuti Zanu-PF ibude muhurongwa uhu munyika moitwa sarudzo pasina bumbiro idzva.
Mutauriri wemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, VaGeorge Charamba, vanoti COPAC yatadza zvachose kuwirirana uye pane zvayawirirana zvcho, zvizhinji zvinokonzera kuti nyika iende parumananzombe kana kutadza kunyatsozvidziviririra.
Mashoko aya ari kutsinhirwawo naVaJonathan Moyo nevamwe mubato iri. Komiti yepamusoro soro yeZanu-PF yange yapa vanoitungamira munhaurirano, VaPatrick Chinamasa naVaNicholas Goche kusvika Chishanu kuti vaone kuti COPAC yapeta basa rayo.
Asi masachigaro eCOPAC anoti havanei nezviri kutaurwa neZanu-PF.
Asi vamwe muZanu-PF vanoti zviri kutaurwa naVaMoyo nevamwe vavo hazvina maturo uye zvinozopa kuti Zanu-PF ibatwe neseri kweruoko nedzimwe nyika.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC, VaMunyaradzi Paul Mangwana veZanu-PF, vanoti basa riri kunonotswa nenyaya yekuti mapato ezvematongerwo enyika ari kutora nguva kuti awirirane.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC, VaDouglas Mwonzora veMDC-T, vanoti veZanu-PF havana simba rekuvaudza zvekuita.